Barashada Maamulka Ganacsiga Caalamiga | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Buugga Warsame iyo Wariyenimo
Sheeko Naxdin Leh: “Qorraxdu Waxay Annaga Noola Muuqataa Mid Si Aad Gaabis Ah Usoo Baxda”
BBC Somali, August 14, 2018
Dhacdada Qalbi Dhagax, Dhacdo Lama Filaan Ah
Cabdikariim Xuseen, September 2, 2017
10 Arrimood uu Daaha Ka Rogay Buugga Laga Qoray Donald Trump
BBC Somali, April 17, 2018
Waa Maxay Qaneecada? Q.2aad
Dhallinta Maxaa Heysta?
Ilhaan Ciise Maxamed, November 28, 2019
Weerarkii 9/11 “Waxa Aanu Leenahay Qorshe”
Maxamed Cabdirisaaq Diriye, April 18, 2019
Barashada Maamulka Ganacsiga Caalamigakoorsooyinka
Cabdijabaar Sh. Axmed — October 2, 2015
Ganacsiga wuxuu u baahanyahay xirfado kalle duwan hadba nooca ganacsigaada uu yahay. Ganacsiga marwalbo wuu sii kalla adagyahay waxayna ku xerantahay hawsha iyo sidda aad adiga go’aankaada u wanaagsanyahay. Ganacsiga marwalbo wuxuu u baahanyahay go’aan wanaagsan.
Ganacsadaha waa qofka abuura fikirka ganacsiga shirkada. Marka loo fiiriyo siyaabaha kalla duwan ee ganacsiga ayaa waxay u kalla duwanyihiin qaab uu ku shaqeeyo gudaha dalka oo kali, qaabka kalena waa qaab u dhaxeeyo wadamada sidda shirkadaha waa weyn oo kalle, tusaale ahaan Coca-cola, Basken-robben, London Dairy, Pepsi, International Bank Of Somalia, Premier Bank, Yoga, Tetra Pak, Ikea, Dahabshiil, Qaran Express, Kaah, Fastpay, McDonald, KFC, Amazon iyo kuwa kalle oo badan oo aan halkaan lagu soo koobi karin.
Waxaa jiro kuwa ka shaqeeyo gudaha hal wadan oo kali, sidda shirkada Hormuud Telecom, SOSTEC, shirkada korontada ee gobolka Banaadir, BECO, Bahnano Hospital, Somtel, iyo kuwa kalle oo aad haysataan tusaalooyinkiisa. Waxaa marwalbo kalla duwan shaqada nooc shirkada aan soo wada sheegey. Kuwa ka shaqeeyo gudaha dalka oo kali waa ay ka dhib yaryihiin kuwa ka shaqeeyo gudaha dalka iyo dalka binaankiisa intaba (multinational companies).
Shirkada markii ay ka shaqeyso dalka binaankiisa waxay soo wajahaysaa siyaabooyin kalla duwan sidda canshuurta, dhaqanka oo ay ku kalla duwanyihiin wadamada iyo bulshada, xaduudaha, wadamada siyaasadooda kalle duwan iwm. Maamulaha guud ee shirkadaha noocaan oo kalle, wuxuu u baahanyahay inuu yahay qof u fikiro qaab caalami ah. Inuu fahansanyahay dhaqamada caalamka, siyaasada, isbedelka lacaga iyo guud ahaan canshuuraha wadamada.
Qoraalkaan oo koorso ah ayaad si toos ah ugu qaadani kartaa Afrikaan. Wax lacag ah lagaama rabo waad is qoreysaa oo kali kadibna halkaas ayaad kalla soconaysaa casharidaada oo toos ah.
Maxaa sharuud ah?
Inaad is qorto, si toosna ulla socoto casharadaada. Waxaad iska qori kartaa gudaha website-http://www.tukesomalism.com/ -qeybta hoose ee qoraalkaan…….
Aqoonkalle inaan leeyahay maloo baahanyahay?
Maya looma baahno ee waxaa sharuud ah inaad Afsoomaaliga aqrini karto oo aadna qori karto. Waxaa kalle lagaaga baahanyahay inaad soo diyaarini karto qoraalada laguu diro adigoo ka tixraacaayo aqoontii aad ka heshay Afrikaan.
Halkaan waxaad ka heli kartaa koorsada Maamulka Ganacsiga Caalamiga waliba waxaad ku qaadan kartaa shahaado adigoo meelwalbo caalamka ka jooga. Riix sawirka hoose:
Next post “Ma ahan in dowladdu caburiso Saxaafada madaxa banaan” hadalkii Maxamed C/llaahi Farmaajo
Previous post Nigeria: Buhari oo maamulaya shidaalka
Waa Maxay Maadada Kimistariga?
Ilhaan Ciise Maxamed, December 8, 2019
Casharka 10aad ee Gargaarka Degdegga |Tukesomalism.com
Casharka 9aad ee Gargaarka Degdegga ah |Tukesomalism.com
August 9, 2018 at 8:58 am	— Reply
Aad ayaan ugu bogay
January 1, 2019 at 9:15 am	— Reply
Massha allh cilmiga fiican ayaad bulshda uhaysaan mahadsanidiiin
December 10, 2019 at 9:30 am	— Reply
AAd Ayaan Ugu Bogay Qormooyinka Aad Soo Dhigtaan Halkan